Alahady – 03/08/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady – 03/08/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (55, 1-3)
Faingàna dia mihinàna
Izao no lazain’ ny Tompo; ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa aty amin’ny rano, na dia ianareo tsy manam-bola aza; avia mividiana vary, ka mihinàna; avia hividy tsy amim-bola, na takalo, hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina; symisasatra amin’izay tsy mahavoky? Koa mihainoa Ahy, ary mihinana izay tsara; ary aoka ny fanahinareo hiravoravo amin’izay hanina fy. Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko; mihainoa ka aoka ho velona ny fanahinareo; ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho,ary hanome anareo ny fahasoavana nampanantenaina an’i Davida.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma (8, 35.37-39)
Ry kristianina havana, iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana va, sa fahaterena, sa fanenjehana, sa fahanoanana, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Amin’izany rehetra izany anefa, dia mihoatra noho ny mpandresy isika, amin’ny alalan’i Iay tia antsika. Satria matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na ireo fahefana, na ny any ambony, na ny any ambany, na zava-boaary hafa, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesoa Tompontsika.
Evanjely nosoratan’i Md Matio (14, 13-21)
Tamin’izany andro izany nony ren’i Jesoa ny nahafatesan’i Joany Batista, dia niala teo ka niondrana an-tsambo kely mba hitokana samy irery any an’efitra; fa rehefa nahare izany ny vahoaka, dia niainga avy amin’ny tanàna samihafa ka nandeha an-tongotra nanaraka Azy. Rehefa niala tao an-tsambo Izy, dia nangoraka nahita ireto vahoaka betsaka, ka nositraniny ny marary teo aminy. Ary nony hariva ny andro, dia nanatona Azy ny mpianany nanao hoe: “Tany efitra ity, ary efa hariva ny andro; koa ravao ny vahoaka handeha hividy hanina eny amin’ny vohitra”. Fa hoy i Jesoa taminy: “Tsy tokony handeha izy, fa omeo hanina”. Dia hoy ireo taminy: “Tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa atý aminay”. Hoy Izy taminy: “Ento aty amiko izany”. Dia nasainy nipetraka tamin’ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nitso-drano; ary nony efa novakiany ny mofo dia nomeny ny mpianany, ka nozarain’ny mpianany tamin’ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nangonina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno sobika roa ambin’ny folo. Nefa dimy arivo lahy no isan’ny nihinana afa-tsy ny zaza amam-behivavy.